05/12/2017 /in Press release ဗမာစာ pll_5a26137d4ba86 /by ryujimaung
ခင်မင်ရသောမိတ်ဆွေများနှင့် တန်ဖိုးထားရသောဝယ်ယူသူများ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားပေါင်း ၅၆၀၀ ကျော်ကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန် ယခုလို ကြော်ငြာခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ပင်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားကောင်းတဲ့ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်ကြသည့် LEECO ၊ NIKON ၊ OTTO ၊ Asia Solar ၊ TK Power ၊ Yi Mon Electronic စသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် တခြား ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း အမျိုးအစားအလိုက် ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းများတွင်ပါဝင်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တန်ဖိုးထားရသောမိတ်ဆွေများနှင့် ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်စေရန် အမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်သွားပါမည်။ Ryuji finance ကုမ္ပဏီ မှဝယ်ယူသူအသစ်များအတွက် Hire purchase အစီအစဉ်မှ customer များ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီပေးပါသည်။ customer […]
06/11/2017 /in Press release ဗမာစာ pll_59ffff9fbabb4 /by ryujimaung
ခင်မင်ရသောမိတ်ဆွေများနှင့် တန်ဖိုးထားရသောဝယ်ယူသူများ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားပေါင်း ၅၄၀၀ ကျော်ကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန် ယခုလို ကြော်ငြာခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ပင်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားကောင်းတဲ့ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်ကြသည့် acer ၊ hp ၊ Jaquar ၊ PREMIER ၊ SAMSUNG ၊ SINGTECH ၊ Skyworth ၊ Xiaomi စသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် တခြား ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း အမျိုးအစားအလိုက် ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းများတွင်ပါဝင်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တန်ဖိုးထားရသောမိတ်ဆွေများနှင့် ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်စေရန် အမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်သွားပါမည်။ Ryuji finance ကုမ္ပဏီ မှဝယ်ယူသူအသစ်များအတွက် Hire purchase အစီအစဉ်မှ customer များ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီပေးပါသည်။ customer […]
ရူဂျီငွေရေးကြေးရေး ကုမ္ပဏီ၏ သတင်းကောင်းတစ်ခု
20/09/2017 /in Press release ဗမာစာ pll_59c24af580ccb /by ryujimaung
အခုချိန်ကစပြီး Ryuji Finance မှပစ္စည်းများကို Online Shopping ဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း 5000 ကျော်ကို သင့်ဖုန်းမှတစ်ဆင့် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ သင့်အိမ်အရောက် Free Delivery လုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။ ရန်ကုန်မြို့ပြင်နှင့် နယ်မှ Customer များကို ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ကားဂိတ်များသို့ Free Delivery ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာပါ။ အိမ်မှာနေရင်း လွယ်ကူစွာရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ Link ကို Click နှိပ်ပြီး ချက်ချင်းဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ အသေးစိပ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ 01 210 620,01 210 459,01 212 051 [Website] https://products.ryujifinance.com/
05/09/2017 /in Press release ဗမာစာ pll_59ae16c87694e /by ryujimaung
ခင်မင်ရသောမိတ်ဆွေများနှင့် တန်ဖိုးထားရသောဝယ်ယူသူများ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန် ယခုလို ကြော်ငြာခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ပင်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားကောင်းတဲ့ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်ကြသည့် JUKI ၊ Divine ၊ TCL ၊ hp ၊ Huawei ၊ NIBBAN ၊ SAMSUNG ၊ Xiaomi စသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် တခြား ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း အမျိုးအစားအလိုက် ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းများတွင်ပါဝင်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တန်ဖိုးထားရသောမိတ်ဆွေများနှင့် ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်စေရန် အမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်သွားပါမည်။ Ryuji finance ကုမ္ပဏီ မှဝယ်ယူသူအသစ်များအတွက် Hire purchase အစီအစဉ်မှ customer များ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီပေးပါသည်။ customer […]
07/08/2017 /in Press release ဗမာစာ pll_5987de13ea87d /by ryujimaung
ခင်မင်ရသောမိတ်ဆွေများနှင့် တန်ဖိုးထားရသောဝယ်ယူသူများ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန် ယခုလို ကြော်ငြာခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ပင်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားကောင်းတဲ့ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်ကြသည့်GIONEE ၊ ASA ၊ Hatari ၊ SINGTECH ၊ Canon ၊ DELL ၊ HTC ၊ Glory ၊ Skyworth ၊ Toshino စသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် တခြား ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း အမျိုးအစားအလိုက် ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းများတွင်ပါဝင်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တန်ဖိုးထားရသောမိတ်ဆွေများနှင့် ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်စေရန် အမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်သွားပါမည်။ Ryuji finance ကုမ္ပဏီ မှဝယ်ယူသူအသစ်များအတွက် Hire purchase အစီအစဉ်မှ customer များ […]
20/07/2017 /in Events, Press release ဗမာစာ pll_5970a13331555 /by ryujimaung
Ryuji Finance Co., Ltd. တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ Ryuji Finance ၏ တစ်ဆယ့်တစ်ကြိမ်မြောက် ကိုယ်စားလှယ်ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးပွဲအား သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) ၌ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီအကြောင်း၊ ရည်မှန်းချက်များ၊ နိုင်ငံတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် Hire Purchase လုပ်ငန်းအား ဆွေးနွေးတင်ပြရန် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းပုံစံမှာ အကျိုးကျေးဇူးကိုအတူတကွမျှဝေ၍ သင်၏ လက်ရှိလုပ်ငန်းကို အခန်းကဏ္ဍအမျိုးမျိုးတွင် တိုးချဲ့နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုဆွေးနွေးပွဲမှာ Ryuji Finance မှ ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုသဖွယ်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်သူများ အတွက် နေ့လယ်စာအချိုပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံမှာဖြစ်သည့်အပြင် သင်သိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအား […]
04/07/2017 /in Press release ဗမာစာ pll_595afb8843e0a /by ryujimaung
ခင်မင်ရသောမိတ်ဆွေများနှင့် တန်ဖိုးထားရသောဝယ်ယူသူများ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားပေါင်း ၄၈၀၀ ကျော်ကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန် ယခုလို ကြော်ငြာခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ပင်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားကောင်းတဲ့ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်ကြသည့်Pumpkin ၊ Ariston ၊ Rinnai ၊ JOVEN ၊ BOSCH ၊ SENCAN ၊ BERALA ၊ AIR FLOW စသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် တခြား ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း အမျိုးအစားအလိုက် ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းများတွင်ပါဝင်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တန်ဖိုးထားရသောမိတ်ဆွေများနှင့် ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်စေရန် အမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်သွားပါမည်။ Ryuji finance ကုမ္ပဏီ မှဝယ်ယူသူအသစ်များအတွက် Hire purchase အစီအစဉ်မှ customer များ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီပေးပါသည်။ customer […]
05/06/2017 /in Press release ဗမာစာ pll_5934c5af22b05 /by ryujimaung
ခင်မင်ရသောမိတ်ဆွေများနှင့် တန်ဖိုးထားရသောဝယ်ယူသူများ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားပေါင်း ၄၂၀၀ ကျော်ကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန် ယခုလို ကြော်ငြာခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ပင်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားကောင်းတဲ့ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်ကြသည့် beko ၊ ELECOM ၊ Logitec ၊ Midea ၊ Skyworth စသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် တခြား ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း အမျိုးအစားအလိုက် ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းများတွင်ပါဝင်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တန်ဖိုးထားရသောမိတ်ဆွေများနှင့် ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်စေရန် အမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်သွားပါမည်။ Ryuji finance ကုမ္ပဏီ မှဝယ်ယူသူအသစ်များအတွက် Hire purchase အစီအစဉ်မှ customer များ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီပေးပါသည်။ customer မှ လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို ပထမဆုံးအနေဖြင့် ၃၀ % အရင်ပေးချေလိုက်ယုံဖြင့် […]
12/05/2017 /in Events, Press release ဗမာစာ pll_59152d0c5926b /by ryujimaung
Ryuji Finance Co., Ltd. တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ Ryuji Finance ၏ ဒဿမအကြိမ်မြောက် ကိုယ်စားလှယ်ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးပွဲအား ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) ၌ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီအကြောင်း၊ ရည်မှန်းချက်များ၊ နိုင်ငံတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် Hire Purchase လုပ်ငန်းအား ဆွေးနွေးတင်ပြရန် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းပုံစံမှာ အကျိုးကျေးဇူးကိုအတူတကွမျှဝေ၍ သင်၏ လက်ရှိလုပ်ငန်းကို အခန်းကဏ္ဍအမျိုးမျိုးတွင် တိုးချဲ့နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုဆွေးနွေးပွဲမှာ Ryuji Finance မှ ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုသဖွယ်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်သူများ အတွက် နေ့လယ်စာအချိုပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံမှာဖြစ်သည့်အပြင် သင်သိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအား မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ […]
Ryuji Finance Co.,Ltd.၏ Agent များသိရှိရန်အသိပေးခြင်း
11/05/2017 /in Press release ဗမာစာ pll_5914156907cdc /by ryujimaung
မြစ်ကြီးနားမြို့၌ Ryuji Finance Co.,Ltd. ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်ဘဲ ကုမ္ပဏီအမည်ကို အသုံးပြုကာ ပစ္စည်းများအား အရစ်ကျရောင်းချနေသည်ဟု ကြားသိရပါသည်။ ယခုလက်ရှိအချိန်ထိ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် Ryuji Finance Co.,Ltd.၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်မရှိသေးပါ။ Ryuji Finance Co.,Ltd.၏ အဓိကရည်ရွည်ချက်မှာ – Customer များအနေဖြင့် အမျိုးအစားမှန်ကန်သည့် ပစ္စည်းများကို စိတ်ချယုံကြည် စွာသုံးစွဲနိုင်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Customer များအနေဖြင့် Ryuji Finance Co.,Ltd. ၏ ကိုယ်စားလှယ် မှန်ကန်မှုရှိမရှိ သိလိုပါက Ryuji Finance Co.,Ltd. ၏ ရုံးချုပ်သို့ ဖုန်းဆက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ Facebook မှသော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပြီး မေးမြန်းချက်များကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိ ပြန်လည်ဖြေဆို ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ […]